Kedu ụdị akwa kwesịrị ekwesị maka ụmụaka？
1. Olee ụdị akwa nwata kwesịrị ekwesị? A na-ahọrọkarị ebe a na-ehi ụra na-adabere n’afọ nwa ahụ, e nwekwara ebe a na-akwagharị akwagharị na ihe ndina. Ihe ndina ahụ dị mma maka ụmụ amụrụ ọhụrụ, ụdị akwa a nwere ike ichebe nwa ahụ nke ọma. Ma ka nwatakiri na-etolite nwayọ, ike ...
Kedụ uru anyị ga - enweta site na Mee N'onwe Anyị ụmụaka furniture
Na 13 afọ ahụmahụ na ụmụaka na ngwá ụlọ ụlọ ọrụ, anyị ụlọ ọrụ na-eche echiche banyere otú ọ bụghị nanị na-eme ka ngwaahịa ndị ọzọ nkasi obi, ahụ ike ka ụmụaka, ma na-ewetara ndị ọzọ playable, operable maka ụmụaka na ezinụlọ. Ddị nke mbụ N'onwe Gị bụ ụdị oche sofa dị elu, ụmụaka nwere ike ịnwa ịkwaga ha, mak ...
Anyi na i sonye na Live Live anyi banyere umuaka ndi ajuju na abali iri-abuo n’ime onwa iri-abuo, 2020
N'ihi ọrịa corona na-adịghị agwụ agwụ na-efe efe, anyị enweghị ike izute ndị ahịa anyị niile na ihe ngosi ọdịnala. N'ime ọnwa 2 gara aga, anyị jidere ihe ngosi iri na ise site na ụdị ọwa niile, dị ka ngosi ntanetị n'ịntanetị, ngosipụta ọnlaịnụ Alibaba. Ọ bụ ezigbo ụzọ iji gosipụta ọhụụ ọhụrụ na ire ere ...
Maka ọtụtụ ndị, nkịta dị ka ndị ezinụlọ.
Maka ọtụtụ ndị, nkịta dị ka ndị ezinụlọ. Nọ na nkịta mgbe ọrụ gachara bụ oge kacha nwee obi ụtọ ụbọchị. N'oge a, mgbe ndị mmadụ zụtara ngwaahịa anụ ụlọ, ha ga-eme m ...
Kedu ihe ụmụaka nwere ike imepụta arịa ụlọ maka afọ 2020?
Kedu ihe ụmụaka nwere ike imepụta arịa ụlọ maka afọ 2020? - na N'onwe Gị osisi ngwá ụlọ kwesịrị ịbụ otu ezigbo nhọrọ. Dongguan City Baby furniture Co., Ltd. amalitelarị usoro ọhụụ nke ụmụaka na afọ a, nke dị mma itinye ebe ọ bụla n'ụlọ, ime ụlọ ụmụaka, ụlọ akwụkwọ ọta akara. Ọhụrụ ...
Ngosipụta ntanetị na ihe ngosi dị ndụ
Etu esi ewetara ndị ahịa anyị dị oké ọnụ ahịa atụmatụ ọhụrụ n'ụdị afọ 2020 a na-enwetụbeghị ụdị ya? Ihe ngosi Live ga-abụ otu n'ime ụzọ dị mma. Na June, Dongguan City Baby ngwá ụlọ Co., Ltd. ejirila ihe ngosi iri abụọ na-adị ndụ na ntanetị na ntanetị na ntanetị na Alibaba.com. Ọ bụ ọwa ọhụrụ iji gosi ne ...
Dongguan City Baby Furniture CO., Ltd. gbara ajụjụ ọnụ site na TVS1 "Infantential Cantonese Merchant" ma wepụta ya n'akụkụ niile nke china na Nov 10th, 2019
site ha na 20-04-03